Barnaamijka Cimilada & Tamarta ee Midwest wuxuu adeegsadaa maaliyaddiisa deeq-bixineed si uu u taageero dadaallada lagu dhisayo awoodda iyadoo loo marayo iskaashi, iswaafajinta cimilada iyo yoolalka sinnaanta si loo horumariyo waxqabadka geesinimada leh ee dhibaatada cimilada.
Barnaamijkeenu wuxuu qaataa a nidaamyada badala muraayadaha indhaha, iyadoo diirada la saarayo bedelida xaaladaha sii waaraya dhibaatada cimilada, oo ay ku jiraan cunsuriyada qaabdhismeedka. Waxaan toos u siineynaa deeq bixin xagga shaqada oo bedeleysa moodooyinka maskaxda, isbeddelaya firfircoonida awooda, kaqeyb galinta bulshada, iyo hormarinta siyaasadaha isbadalka, dhaqamada, iyo qulqulka kheyraadka, si si weyn looga jaro wasakheynta kaarboonka badhtamaha Midwest sanadka 2030.
Iyadoo la raacayo haya'adda Qaab-dhismeedka Istaraatiijiga ah, Habka barnaamijku wuxuu salka ku hayaa barasho joogto ah iyo waxqabad la-qabsi ah iyadoo duruufaha dhaqaale, siyaasadeed, iyo bulsheed ee aan ku shaqeyno ay sii soconayaan.
Xoojinta Kaqeybgalka Dimuqraadiga
Isbedelka cimiladu dhammaanteen wuu ina saameynayaa, laakiin dadka Madowga ah, Dadka asaliga ah, dadka midabka leh, iyo bulshooyinka dakhligoodu hooseeyo ayaa saamaynta ugu badan ku leh. Waxaan ubaahanahay dimuqraadiyad furan oo loo siman yahay si loo hubiyo in beelaha la hayb sooco ay leeyihiin cod iyo awood ay ku keenaan isbadal ku saabsan arrimaha saameeya noloshooda iyo noloshooda, oo ay ku jirto isbedelka cimilada. Tani waa hadaf lala wadaago Bulshooyinka Feejignaanta & Sinnaanta ah barnaamijka.
Beddel Nidaamka Tamarta
Ilaalinta dhulkeena waxay u baahantahay in la badalo sida aan u soo saarno una isticmaalno koronto. Waxaan u baahanahay inaan ku taageerno ilaha tamarta badan ee kaarboon-ka-xorta ah iyada oo loo marayo suuqyada iyo isbeddelada teknoolojiyadda, loo beddelo ilaha tamarta aan qiiqa lahayn, iyo in la gaaro 100% awood nadiif ah, dhammaantood sida ugu dhakhsaha badan.
Korantada Gaadiidka iyo Dhismayaasha
Dhismayaashayada iyo nidaamyada gaadiidka wali si xoog leh ayey u isticmaalaan shidaalka. Waxaan u baahanahay inaan ku badalno nidaamyada wasakheynta tikniyoolajiyad cusub oo ku shaqeeya koronto nadiif ah, iyo taageerida kaabayaasha dhaqaalaha ee xarumaha baahida dhabta ah ee dadka.
Kaarboon Sequester ah oo ku saabsan Dhulalka Shaqeeya
Dhulka ay ka shaqeyso Midwest - dhul-beereedkeenna, beeraheenna, iyo dhulkeena keymaha - waxay taageeraan nolosha iyo habnololeedka. Waxaan ubaahanahay inaan lashaqeyno wakiillada wadamadaas si loo hormariyo xalalka kala gooya kaarboonka iyo ilaalinta meelaha dad badani ugu yeeraan guriga.
Barnaamijku wuxuu si toos ah u taageeraa shaqada Minnesota iyo Midwest sare iyo iyadoo lala kaashanayo deeq-bixiyeyaasha.